Weli miyaad ka walwalsan tahay inaadan helin mashiinka goynta saxda ah? Bishii Meey ee sanadkan, shirkadeena jiahao waxay qaabeeysay mashiin cusub oo baatrool lagu jarayo, kaas oo leh qaab naqshad casri ah oo u gaar ah, kaasoo saameyn ku yeelan kara aragtidaada. JH350 Mashiinka Mashiinka baatroolku wuxuu si fudud u gooyaa shubka, Dhagaxa, lebenka, iyo laamiga, oo leh ...
At 3:30 pm on Ogosto 7, 2020, shirkadeena lagu qabtay shir gaar ah wax soo saarka weyn xarunta dhexe ee xarunta Yongkang. Shirkadaha ka socda warshadaha qalabka ayaa si gaar ah loogu casuumay inay ka soo qayb galaan shirka. Diyaargarowgeena taxaddar leh, shirkadeennu waxay muujisay JH-168A 2200W dumin koronto ...
Oktoobar 20-keedii, mashiinnada Yongkang iyo Expo Hardware waxaa lagu qabtay Yongkang International Convention and Exhibition Center. Bandhigu wuxuu inta badan muujiyey qalabka wax soo saarka iyo mashiinada. Iyada oo loo marayo bandhiggan, shirkadeena waxay u muujisay alaabadayada macaamiisha, iyo isgaarsiinta goobta, waxaan wadaagnaa ...